Aga m Fitbit Track ịgba ígwè - BikeHike
Fitbit ọ dị mma maka ịgba ígwè?
Kedu ka m ga-esi tinye ịgba ígwè na Fitbit m?
Kedu ngwa ịnya igwe na-arụ ọrụ na Fitbit?
Kedu ka Fitbit si agbaso igwe kwụ otu ebe n'èzí?
Fitbit Charge 4 ọ na-agbaso ịgba ígwè na-akpaghị aka?
Kedu ka m ga-esi soro ịnya igwe na Fitbit Charge 3 m?
Kedu ka m ga-esi soro igwe kwụ otu ebe m?
Kedu ihe kpatara Fitbit anaghị agụ ịnya igwe dịka nzọụkwụ?
Kedu otu ị ga-esi chịkwaa ihe nfe na igwe kwụ otu ebe?
Fitbit ọ na-emekọrịta ihe na peloton?
Kedu ka Fitbit si mara na ị na-agba igwe?
Enwere ike iji Fitbit 4 maka ịgba ígwè?
Kedu ka m ga-esi tinye ịgba ígwè na Fitbit Charge 4 m?
Kedu ka m ga-esi soro igwe kwụ otu ebe na Fitbit Charge 4 m?
Fitbit Charge 3 ọ na-amata ịnya igwe?
Kedu ka m ga-esi edozi ịgba ígwè na Fitbit Charge 3 m?
Ịgba ígwè ọ dị mma ka ịga ije?
Kedu otu m ga-esi soro igwe kwụ otu ebe na ekwentị m?
Kedu ihe kacha mma GPS tracker maka igwe kwụ otu ebe?
Ịnya igwe nwere trackers?
Ee, Fitbits nwere ike soro ịnya igwe kwụ otu ebe site na iji teknụzụ akpọrọ SmartTrack na ha na-enyere ndị na-agba ígwè aka n'ọtụtụ ụzọ. Otu akụkụ dị iche iche nke ọtụtụ ngwaahịa Fitbit, nke egosipụtara na ọ dị mkpa maka ịgba ígwè, bụ ntinye na ọrụ GPS.
Fitbit Charge 4: Best mma tracker maka ịgba ígwè Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịhapụ ekwentị gị n'ụlọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịweta ụgwọ maka ịnya igwe kwụ otu ebe. Yana data ọnụọgụ obi a na-emebu, Charge 4 bụkwa ihe ngosi izizi nke metric ahụike ọhụrụ maka Fitbit – Nkeji Mpaghara Ọrụ.
Na dashboard ngwa Fitbit kpatụ taịlị mgbatị ahụ iji mepee akụkọ mmega ahụ gị. Nke a bụ taịlị na-ekwu "Soro mmega ahụ" ma ọ bụrụ na ị rụbeghị ọrụ taa. Kpatụ akara ngosi elekere elekere n'elu akuku aka nri. Pịa Ndekọ. Kpatụ mmemme na-adịbeghị anya ma ọ bụ chọọ ụdị mmega ahụ. Hazie nkọwa mmemme wee pịa Tinye.
Ngwa 10 kacha elu maka inweta ihe kacha mma na Fitbit Strava gị. Strava jikọtara nke ọma na ọtụtụ ngwaọrụ dabere na GPS, mana ọ bụkwa ngwa siri ike maka ndị na-ahụ maka ahụike. Mapụ ọsọ m. My Fitness Pal. Fitstar Onye na-enye ọzụzụ. Ngwa hydration nke Thermo. Echefuola ya! Chọta Fitbit m. Fitbase.
N'eziokwu na Fitbit Surge, igwe kwụ otu ebe na-enye GPS na ihe mmetụta ndị ọzọ dị elu na ngwaọrụ ahụ iji mee ka ndị na-agba ọsọ hụ anya, ogologo oge, nkezi ọsọ, ọnụego obi, calorie ọkụ na oge; stats na-emekọrịta ozugbo na ikuku dashboard ngwa Fitbit iji nyochaa ụzọ, ọsọ na elu n'ụzọ zuru ezu.
Na ndabara egwuregwu ndị Charge 4 na-esochi gụnyere ịgba ọsọ (GPS), ịnya igwe (GPS), igwu mmiri, igwe na-adọkpụ, mgbatị ahụ n'èzí (GPS) na ije ije (GPS). Nke ahụ bụ n'ihi na Charge 4 nwere ike ijide naanị ụzọ mkpirisi isii maka ụdị mgbatị ahụ na ngwaọrụ n'onwe ya.
Enwere m Charge 3, na ụzọ ị ga-esi nweta igwe kwụ otu ebe bụ nke a: Mepee ngwa ahụ wee pịa avatar gị (n'elu aka ekpe; nwere ike ịbụ ihu gị) Nke a na-ewega gị na ibe Akaụntụ gị; chọta ngwaọrụ gị n'okpuru (Charge 3) wee pịa ya. Nke a bụ ebe ị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, họrọ ihu elekere; pịgharịa gaa na Ụzọ mkpirisi mmega ahụ; kpatụ ya.
Enwere ike iji igwe igwe GPS tracker maka ihe ọ bụla 2 wheelers dị ka skooty / skuuta wdg. Echiche dị mkpa nke usoro nleba anya ụgbọ ala Letstrack bụ iji hụ na nchekwa nke ndị ahịa ya niile. Ngwa nlekota GPS maka igwe kwụ otu ebe ga-etinyerịrị onye ga-eso ma nyochaa ọnọdụ onye ahụ metụtara.
Ọ dị nwute, Apple Watch, Fitbit, na ndị na-ahụ maka ọrụ ndị ọzọ anaghị ejide usoro dabara adaba maka ịnya igwe. Nke a bụ n'ihi na ndị na-ahụ maka ọrụ dịka Apple Watch, Fitbit, Garmin na Xiaomi Mi Band na-agụ usoro dabere na mmegharị ogwe aka. Ogwe aka gị na-anọkarị mgbe ị na-agba igwe.
Iji soro ịgba ígwè n'ime ụlọ na ngwaọrụ gị, gaa na "mmega ahụ" wee họrọ "Spinning". Mgbe ahụ, ogologo pịa mkpirisi mkpirisi ka ịmalite wee pịa ya ozugbo ịmechara. FitBit ga-edekọ data niile metụtara ọnụego obi gị, ọsọ, kalori ọkụ na ogologo oge.
Ugbu a, ị nwere ike kesaa metrik si na Peloton na-agba ọsọ na-akpaghị aka na akaụntụ Fitbit gị oge ọ bụla ịmechara njem. Jikọọ akaụntụ Peloton na Fitbit gị ka ilele metrik Peloton dị ka ogologo mgbatị ahụ, njem dị anya na kalori gbara ọkụ na dashboard Fitbit gị.
Fitbit na-eji data ọrụ gị yana Basal Metabolic Rate (BMR) na njikọ iji tụọ kalori ọkụ gị n'oge nnọkọ. Ikike iji tụọ ike mgbatị ahụ gị na usoro ihe omume gị site na nyochaa ọnụọgụ obi gị dị oké mkpa nye ọtụtụ ndị na-agba ígwè.
Fitbit Charge 4 bụ elekere mmega ahụ maka onye ọ bụla na-ewere onwe ya 'na-arụsi ọrụ ike', ọ bụghị naanị ndị na-agba ígwè.
Na ngwa ekwentị gị: Kpatụ foto profaịlụ gị, wee chajịa 4. Pịgharịa gaa na Ụzọ mkpirisi mmega ahụ. Pịa Dezie n'elu aka nri wee wepụ ụzọ mkpirisi ị chọghị. Ugbu a ụzọ mkpirisi + mgbatị ahụ ga-atụgharị na-acha anụnụ anụnụ. Pịa + kpatụ ụzọ mkpirisi ma tinye elliptical.
Iji soro oge ịgba ígwè n'ime ụlọ gị na Fitbit gị, gaa na mgbatị ahụ wee pịgharịa na mmemme ahụ ruo mgbe ị ga-agbagharị. Naanị ihe ị ga - eme bụ pịa ya ka ịmalite ndekọ wee pịa ya ọzọ ka ịkwụsị ya mgbe ịmechara. Dị Mfe! Jul 4, 2021.
Fitbit Charge 3 dị mma maka ịgba ígwè na ọtụtụ ndị ọzọ. Site na ụdị mmega ahụ arụnyere n'ime ya, nchọpụta mmega ahụ SmartTrack, yana nleba anya obi, Fitbit Charge 3 bụ ezigbo onye na-ahụ maka ịnya igwe maka ịgba ígwè, ma ọ nọ n'ụzọ ma ọ bụ na klaasị.
Nke a bụ otu a: Mepee ngwa Fitbit. Kpatụ akara ngosi dị n'akụkụ aka nri elu ka ịnweta ntọala akaụntụ gị. Kpatụ Charge 3 na listi ngwaọrụ. Pịgharịa gaa na "Ụzọ mkpirisi mmega ahụ" wee pịa ya.
Ịgba ígwè na-arụ ọrụ nke ọma karịa ịga ije, ya mere ị ga-arụsi ọrụ ike site n'iji nwayọọ na-eje ije ma eleghị anya na-emega ahụ obi gị, ngụgụ na akwara gị. N'aka nke ọzọ, ịgba ígwè nwere ike bụrụ ihe siri ike na úkwù, ikpere na nkwonkwo ụkwụ gị karịa ịga ije.
Nweta stats ozugbo na ekwentị gị, mepee ngwa Google Fit. Pịa Tinye mgbatị ahụ . Ka ịhọrọ mmemme ị na-achọ ibido, kpatụ akụ ala . Pịa Malite mgbatị ahụ. Ọ bụrụ na ị na-agba igwe kwụ otu ebe, buru ekwentị gị n'akpa gị. Nsochi ga-adị mma karịa ma ọ bụrụ na etinyere ekwentị gị ma ọ bụ n'akpa azu.
GPS kacha mma maka ụgbọ ala na igwe kwụ otu ebe na India Onelap Micro - GPS Tracker Waterproof. Autowiz Obd GPS Car Tracker. USGlobalSat USB nnata GPS. Acumen Tracker UC 900 GPS Tracker. Lamrod Supreme Google Link GT02A GPS Tracker. Ngwa Akari Gt02A GPS Tracker. Zaicus ST-901 Batrị GSM GPS Tracker anaghị egbochi mmiri.
Enwere ụdị track GPS dị iche iche dị n'ahịa na-enyere gị aka idobe ọnọdụ igwe kwụ otu ebe. Ụfọdụ ndị na-enye ọrụ GPS na-enyekwa agbakwunyere nhọrọ dị elu nke ịgbalite ngagharị na nsochi ngwa ngwa nke ọnọdụ ozugbo nke na-enyere aka nke ukwuu ma ọ bụrụ na ezuru ma ọ bụ furu igwe igwe gị.
Na-agba ọsọ Fitbit Charge Track
Ajụjụ: Nwere ike Fitbit Charge 3 Track ịgba ígwè
Na-eme Fitbit Charge 3 Track ịgba ígwè
Ajụjụ: Fitbit m nwere ike ịgba ígwè 2 Track
Fitbit m na-akwụ ụgwọ ịgba ígwè Track Hr
Nwere ike Fitbit Charge 2 Track ịgba ígwè
Ọ na-agba ọsọ Fitbit Track
Ị nwere ike soro ịgba ígwè na Fitbit Charge 2
Otu esi soro ịgba ígwè na Fitbit Charge 2
Azịza ngwa ngwa: Fitbit Charge Track Bicycle
Nwere ike Fitbit Charge Track igwe kwụ otu ebe
Azịza ngwa ngwa: Fitbit Charge Track Bike
Azịza ọsọ ọsọ: Fitbit na-agba ọsọ ịgba ígwè